I-China Cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka i-16 oz Boston ibhotile ejikelezileyo kunye ne-style engenazintsimbi yentsimbi yompompo kunye nabaxhasi | IHoyer
I-Cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka i-16 oz Boston ibhotile ejikelezileyo kunye nepeyinti yentsimbi engenasici
Ibhotile yeCobalt: Iglasi yeCobalt ibonelela ngokhuseleko lwe-UV, ngakumbi i-aromatherapy, iioyile ezifanelekileyo kunye nonyango lwezamayeza ukugcina iziphumo ezinenzuzo.
Impompo yesinyithi engenazintsimbi: Umphambili wempompo yintsimbi engaphandle ye-stain kunye ne-BPA-MAHHALA yeplasitiki yepayipi.
Izinto ezahlukeneyo: Ikhitshi, igumbi lokuhlambela, impahla yokuhlamba, iofisi, salon, nokunye. IAromatherapy imixube yeoyile eyimfuneko, isepha yokuhambisa, isampulu kunye neerhasi zokuhambisa, abacoci bezandla, njl.
Umthamo: 475ml / 16 oz
Ukuphakama: I-216mm / 8.5 intshi
Umbala: i-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka okanye ngokwemfuno yakho
Ngaba uyayithanda ibhulowu? Intsokothile kwaye iseluxolweni. Ezi glasi zebhotile i-boston yeglasi yeBoston inokongezwa nakweyiphi na imeko yokuchukumisa ukuthula, ngakumbi umphambili wentsimbi ongenaglasi.
Isetyenziselwa: iAromatherapy eyimfuneko yokuxuba ioyile / isepha yokuhambisa izinto / Isicoci sokuhambisa sanitizer / i-Shampoo kunye ne-conditioner dispenser / i-Emulsion yokusabalalisa / nangaphezulu
Ilungele igumbi lokuhlambela, ikhitshi, iofisi, igumbi lokulala kunye negumbi lokufundela.
Impompo yesinyithi engenazintsimbi ingazukubonisa iminwe
Izinto ezingaphakathi kwempompo ephezulu zizitovu zentsimbi engenanto kunye ne-BPA-Free ye-plastiki yokuntywila
Ibhotile engenanto ye-16 oundes = iikomityi ezi-2 = i-1 pint = 475 millilitha
Ukukhuseleka kokutya, iglasi yodidi oluphezulu
Ubungakanani Umthamo: 475ml Ukuphakama: 216 mm Ububanzi: 70 mm Umthamo: 16 oz H: 8.5 intshi D: 2.75 intshi
Umbala Luhlaza / mdaka / iglasi ecacileyo Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
I-MOQ Ii-10,000 zee-pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Umzekelo a. iisampulu esitokhweni:I-QTY: 1-5 ii-pcsIindleko: zinikezwe ngokukhululekileyoIzinto zokuhamba: qokelela
Edlulileyo: I-4 ye-Spice yeGlasi ye-oz Spice eneelebuli zeKhabodi kunye neLize yensimbi engenanto
Okulandelayo: I-16oz Glass yeSepha yokuSasaza ngeSilicone Funnel
iibhotile ze-boston zizonke
ibhotile yeglasi yebhotoni